တရုတ် စီးပွားဖြစ် ဒုံးပျံ ကုမ္ပဏီ Galaxy Energy သည်ယွမ် ၁. ၂၇ ဘီလီယံ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည် – Pandaily
(Source: Galactic Energy)
တရုတ် စီးပွားဖြစ် ဒုံးပျံ ကုမ္ပဏီ Galaxy Energy သည်ယွမ် ၁. ၂၇ ဘီလီယံ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
Jan 24, 2022, 18:30ညနေ 2022/01/24 23:21:56 Pandaily
တရုတ် ပုဂ္ဂလိက အာကာသ လွှတ်တင် ရေး ကုမ္ပဏီ Galaxy Energy က တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် ကြေငြာB နဲ့ B + စီးရီး တွေ ပြီး သွားပါပြီငွေကြေး လည်ပတ်မှုစုစုပေါင်း ယွမ် ၁. ၂၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀၆ ဘီလီယံ) ။
ဤ အလှည့် အပြောင်း နှစ်ခုကို Oriental Wealth Capital (OFC) ၊ Huaqiang Capital ၊ AVIC Finance ၊ China Version Investment နှင့် Factor Capital စသည့် အရင်းအနှီး အဖွဲ့အစည်းများမှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ရရှိသော ငွေများကို အလယ်အလတ် မှ အကြီးစား ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော အောက်စီဂျင် ရေနံဆီ လွှတ်တင် သည့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်ကုန်များနှင့် “ Palas One” ကဲ့သို့သော အခြေခံအဆောက်အအုံ များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် အရှိန်မြှင့် ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Galaxy Energy သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားဖြစ် လွှတ်တင် ရေး ယာဉ် များတွင် ခေါင်း ဆော င်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မျိုးဆက်သစ် စျေးနှုန်း ချိုသာ ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စီးပွားဖြစ် ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် များ၏ ဆန်းသစ် သော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကတိက ဝတ်ပြု ထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း အသုံးပြု သူများကို ပြောင်းလွယ်ပြင် လွ ယ်၊ မြန်ဆန် ။ ဘဏ္ efficient ာရေး အရ ထိရောက်သော အာကာသ လွှတ်တင် ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုပေးသည်။
လက်ရှိတွင် Galaxy Energy သည် အသေးစား အစိုင်အခဲ ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် များ နှင့်အလတ်စား နှင့် အကြီးစား အရည် ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် များတွင် တိုးတက်မှု အချို့ ရှိခဲ့သည်။
အသေးစား အစိုင်အခဲ စီးပွားဖြစ် ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် များအတွက် Galaxy Energy သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော Ceres One (Remote One, Remote Two) အသေးစား စီးပွားဖြစ် ပစ်လွှတ် ယာဉ် များကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ စွာဖြင့် အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင် နိုင်ခဲ့သည်။ ဒုံးပျံ သည် စီးပွားဖြစ် ဖောက်သည် များအတွက် ဂြိုဟ်တု ၆ လုံး အတွက် ပတ်လမ်း လွှတ်တင် ရေး ဝန်ဆောင်မှုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Ceres One Y2 Commercial Rocket မွ ၿဂိဳဟ္တု ၅ လံုး လႊတ္တင္
အလတ်စား နှင့် အကြီးစား အရည် စီးပွားဖြစ် ပစ်လွှတ် သည့် ယာဉ် များအတွက် ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အကုန်တွင် Palas One ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော အောက်စီဂျင် ရေနံဆီ လွှတ်တင် ရေး ယာဉ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒုံးပျံ မော်ဒယ်၏ အနိမ့် ပတ်လမ်း သယ်ဆောင် နိုင်စွမ်း သည် ၅ တန် ထက်မနည်း ပါ။ တိုးချဲ့ထားသော အစုအဝေး ဖွဲ့စည်း မှုသည် ၁၄ တန် အထိရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ဒီဇိုင်း အကြိမ် ၅၀ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်ရှိ တွင်ဤ ပုံစံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုမှာ ချောချောမွေ့မွေ့ တိုးတက် နေပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ စနစ် များ၊ လျှပ်စစ် စနစ်များ နှင့်စွမ်းအင် စနစ်များ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များ ကိုထုတ်လုပ် မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အဓိက အင်ဂျင် သည် နောက်ဆုံး တပ်ဆင် ပြီးနောက် မကြာမီ စမ်းသပ် တော့မည် ဖြစ်ပြီး ၂၀ ၂၃ ခုနှစ်ဇွန်လ တွင်ပထမဆုံး ပတ်လမ်း သို့ ပျံသန်း ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Tags commercial rocket | financing | Rocket | satellites | Technologies
Industry Jan 24 ဇန်နဝါရီ 25, 2022
चीनी वाणिज्यिक रॉकेट कंपनी गैलेक्सी एनर्जी वित्तपोषण में 1.27 बिलियन युआन पूरा करती है
चीन की निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण कंपनी गैलेक्सी एनर्जी ने रविवार को घोषणा की कि उसने बी और बी + राउंड वित्तपोषण में कुल 1.27 बिलियन युआन (यूएस $2006 बिलियन) पूरा कर लिया है।